ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်နှင့် ယေဘူယျအားဖြင့် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ အမှတ်အသားအကြောင်း - အရှင်ဘုရား Michael Avraham
ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်နှင့် ယေဘူယျအားဖြင့် ဂျူးလူမျိုး၏ အမှတ်အသားအပေါ်
ပညာသင်နှစ် - ၂၀၁၁
"ရုတ်တရက် လူတစ်ယောက် မနက်အိပ်ရာက ထလာပြီး လူတွေက လမ်းလျှောက်လာတယ်"
Yom Kippur ဆိုတာကို မသိတဲ့ kibbutzim ရှိနေရင် Shabbat က ဘာလဲဆိုတာ မသိသလို မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ ယုန်များနှင့် ဝက်များကို မွေးမြူကြသည်။ သူတို့အဖေနဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိလား… Array? Array က မြင့်မြတ်တဲ့အရာလား? သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်အားလုံးကို ဖြတ်တောက်ပြီး Torah အသစ်ကို တောင်းဆိုနေကြသည်။ ရှဗ္ဗတ်မရှိ၊ ယာမကိပ္ပုမရှိလျှင် ထိုသူသည် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်သနည်း။
ဤဆောင်းပါးသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပါလက်စတိုင်းတို့ကြား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ပိုမိုများပြားလာသောအခါတွင် ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့သည်၊ သို့သော် ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော အထောက်အထားမေးခွန်းများသည် မျက်နှာပြင်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာပါသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ ပေါက်ကွဲရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အစ္စရေးနိုင်ငံအား ဂျူးနိုင်ငံတော်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသူများထံမှမတောင်းဆိုမီ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင် ဂျူးလူမျိုးသည် အဘယ်အရာနှင့် မည်သူဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင် ဦးစွာသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သော ပါလက်စတိုင်းနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏ ငြင်းခုံမှုများဖြင့် ဤတောင်းဆိုမှုသည် အခြားအရာများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ အချို့က ကျွန်ုပ်တို့အား Khazars ၏သားစဉ်မြေးဆက်များအဖြစ် တင်ပြကြပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစ္စရေးပြည်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသော ရှေးဂျူးများ၏ ပကတိဆက်ရှိနေသော ဂျူးလူမျိုးတို့၏ သမိုင်းဝင်စစ်မှန်မှုကို ပျက်ပြားစေသည်။ တစ်ဖက်တွင်မူ ပါလက်စတိုင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ ငြင်းခုံမှုများအတွက် အခြေခံအဖြစ် သမိုင်းဝင် (အနည်းအကျဉ်းမျှသော) အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကို တင်ပြကြသည်။ အစ္စရေးအစိုးရကိုယ်စား ပါလက်စတိုင်းနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံ Tzipi Livni နှင့် ပါလက်စတိုင်းဘက်မှ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံ Saib Erekat တို့ကြား စကားပြောဆိုထားသည့် အထူးသဖြင့် ရယ်စရာကောင်းသော ဥပမာတစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ :
မြူးနစ်လုံခြုံရေးညီလာခံသို့ အစ္စရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကြီးမှ အဖွဲ့ဝင်များသည် ပါလက်စတိုင်းစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့မှ Saeb Erekat နှင့် ၎င်း၏မိသားစုသည် ခါနနိလူမျိုးဖြစ်ပြီး ယေရိခေါတွင် နှစ်ပေါင်း (၃၀၀၀) မရောက်ရှိမီတွင် လစ်ဗ်နီအား ပါးရိုက်သောအခါ မနေ့ညက အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။ ယောရှုဘင်နုန်၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ဣသရေလ။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးပါဝင်ခဲ့သည့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် Erekat သည် နှစ်ဘက်စလုံး၏ မတူညီသောသမိုင်းဝင် ဇာတ်ကြောင်းများဖြစ်သော အစ္စရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်းတို့အကြောင်းကို စတင်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်းနှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်တို့သည် အမှန်တကယ် ခါနနိလူများ၏ မျိုးဆက်များဖြစ်ကြောင်း စောဒကတက်ခဲ့သည်။ ဂျူးတွေထက် ပါလက်စတိုင်းပိုင်မြေကို ပိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ Livni က အစ္စရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်းတို့သည် မည်သည့်ဇာတ်ကြောင်းက ပိုမှန်သည်သာမက အနာဂတ်ကို မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကို မမေးသင့်ကြောင်း လစ်ဗာနီက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ “ငြိမ်းချမ်းရေး အစီအစဉ်ကို ရင်ခုန်စရာလို့ မမြင်ပါဘူး။ ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချခြင်းသည် နုံအတတ်ထက် အန္တရာယ်မရှိပါ။ “အစ္စရေးက ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။”
လက်တွေ့ကျသော ငြင်းခုံမှုထက်၊ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုဟု သူမယူဆသောကြောင့် Livni သည် ဤအရှက်ရဖွယ်ဆွေးနွေးပွဲကို ရှောင်ရှားရန် ကြိုးစားနေသည်ဟူသော အသိတစ်ခုရှိသည်။ ဤနေရာတွင် မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ ယနေ့ခေတ် ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ မည်သည့်လူမျိုးကိုမဆို ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်ဟု ယူဆကာ အခြားမည်သူ့ကိုမှ ထိုသို့ပြုလုပ်ခွင့်မပြုပေ။ ဂျူးလူမျိုး၏ဝိသေသလက္ခဏာတွင်ပင် မတူညီသောဇာတ်ကြောင်းများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော အပေါက်များရှိသည် (ပမာဏသည် ပါလက်စတိုင်းနမူနာနှင့် အလွန်ကွာခြားသော်လည်း) အများအပြားက ဆိုကြလိမ့်မည်။ Golda၊ Ben-Zion Netanyahu နှင့် အခြားများစွာသော ပါလက်စတိုင်းတို့ကဲ့သို့ မည်သည့်အရာမှ မရှိဟု ပြောဆိုမှုများသည် ယနေ့ခေတ် အလွန်ခေတ်နောက်ကျနေပြီး ဟောင်းနွမ်းနေပုံရသည်။ သမိုင်းဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်များကြောင့် မဟုတ်ဘဲ လူမျိုးနှင့် လူမျိုးကို သရုပ်မှန်ဖြင့်သာ သတ်မှတ်သည့် အယူအဆများကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဝိသေသလက္ခဏာ၊ သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို လက်လွှတ်ရန် ငြင်းဆန်သည်။ သူတို့က မတ်တပ်ရပ်ပြီး ငါတို့ကို ထပ်ခါထပ်ခါ တိုက်ခိုက်တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဂျူးလူမျိုးများကဲ့သို့ ဖြစ်တည်မှုရှိသော လူများကို သိမ်းပိုက်ထားသော အမျိုးသားရေးလက္ခဏာနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်လည်း ဟုတ်ပါတယ် ။ သင်သည် ဘယ်လ်ဂျီယံလူမျိုးစစ်စစ် ဟုတ်မဟုတ် ငြင်းခုံမှုများကို တွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း အဓိကအားဖြင့် ပြိုင်ဘက်များကို အနိုင်ယူရန် ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် သို့မဟုတ် အမျိုးသား-အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု၏ အချစ်ဇာတ်လမ်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ငြင်းခုံမှုများ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံ (သို့) လစ်ဗျား၊ စစ်မှန်ပြီး စစ်မှန်ခြင်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ အဖွဲ့ ဒါမှမဟုတ် လူတစ်ဦးကို စိတ်ကူးကြည့်ဖို့တောင် ခက်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလက္ခဏာကို နမူနာအဖြစ်ယူပါက၊ ကျွန်ုပ်သည် မိုက်ကယ်အေဗရာဟမ်အစစ်အမှန်ဟုတ်၊ Michael Abraham ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ၊ ငါ အဖြေရလား။ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားသည် မိမိကိုယ်ကို ထင်ရှားစေပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန် မလိုအပ်ပါ။ မိသားစု အထောက်အထားနဲ့လည်း အလားတူပါပဲ။ အာဗြဟံမိသားစုမှ သက်ဆိုင်သူတိုင်းသည် ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်၊ ဤအခြေအနေများတွင် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များဆိုင်ရာ မေးခွန်းများသည် ထောင့်ချိုးကျနေပုံရသည်။ နိုင်ငံအများစုမှာ ဒီလိုမျိုး အမျိုးသားရေးလက္ခဏာနဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ သူမရှိပဲ၊ ဒါပဲ။ ဒါဆို ဂျူးလူမျိုးရဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ သူ့အကြောင်းက ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ၊ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဆွေးနွေးမှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ဤဆောင်းပါးတွင် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတွင် ပါဝင်သော နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖော်ပြရန် ကြိုးစားပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် ဘုံသဘောဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ပြဿနာနှင့် ၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်များကို ဦးစားပေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ တင်ပြပါမည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်ပုံကြီးကြီးမားမားမဆုံးရှုံးစေရန်အတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ကွဲလွဲချက်များကို ကျွန်ုပ်မပါဝင်ဘဲ သီးခြားအရင်းအမြစ်များ၊ Torah သို့မဟုတ် ယေဘူယျအတွေးတို့မလိုအပ်ဘဲ ကျွန်ုပ်အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသော ယေဘူယျပုံစံများကို အသုံးပြုခွင့်ပြုပါ။ အထူးသဖြင့် အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်း ပဋိပက္ခ၏ နိုင်ငံရေးအတွက် ကျွန်ုပ်၏ လိုအပ်ချက်များမှာ အစွန်းအထင်းကြီးသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဤနေရာ၌ ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်၏စကားဖြင့် ထွက်ပေါ်လာမည့် တောင်းဆိုချက်များကို သရုပ်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ပဋိပက္ခကိုယ်တိုင်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မပြုပါ။
ယဉ်ကျေးမှု-ဒဿနဆွေးနွေးမှုနှင့် halakhic-Torah ဆွေးနွေးမှု
ဆွေးနွေးပွဲခေါင်းစဉ်တွင် အဓိက အယူအဆ၊ ဂျူးလူမျိုးများ၏ လက္ခဏာမှာ မရေရာပါ။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးမှုကို အနည်းဆုံး လမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်- a. အတွေးအခေါ်-လူမျိုး-ယဉ်ကျေးမှုသဘောအရ ဂျူးအမျိုးသားရေးလက္ခဏာ။ ခ Torah-halakhic အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် ဂျူးလူမျိုးလက္ခဏာ (အများစုသည် ၎င်းတို့သည် မတူညီသော ဆွေးနွေးမှုနှစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသော ယူဆချက်ကို လုံးဝလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ)။ ဤသည်မှာ ဂျူးဘာသာသည် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု သို့မဟုတ် လူမျိုးတစ်မျိုးဟုတ်မဟုတ် (ကျနော့်အထင်အမြင်အရ) မေးခွန်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသောဆွေးနွေးမှုနှစ်ခုမျှသာမဟုတ်၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ကွဲပြားသောဆွေးနွေးမှုနည်းလမ်းနှစ်ခုကို ဖော်ပြသည်- ပိုမိုယေဘုယျသဘောတရားစနစ်တွင် ဆွေးနွေးမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် halakhic-Torah စနစ်တွင် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်ရှိမရှိကို ၎င်းတို့ကဖော်ပြသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားများသည် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများထက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားများသည် မျှဝေထားသော တန်ဖိုးများနှင့် စံနှုန်းများပေါ်တွင် အခြေခံသောကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် ကျူးလွန်ခဲ့သော လုပ်ရပ်များနှင့် ယုံကြည်ချက်များအပေါ်တွင် (အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသော်လည်း၊ ဘဝတွင် မည်သည့်အရာကမျှ ဤမျှရိုးရှင်းသည်မဟုတ်ပါ)။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာသည် ပိုမိုသဟဇာတရှိသော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပြီး သမိုင်း၊ နယ်မြေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ ဘာသာစကား၊ အချို့သောစရိုက်လက္ခဏာများနှင့် အခြားအရာများ သို့မဟုတ် ယင်းတို့အားလုံး၏ ရောနှောမှုအချို့အပေါ် အခြေခံထားသည်။ အများအားဖြင့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာတစ်ခုသည် အများအားဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လက်တွေ့ကျသောမူများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ၊ အတိအကျလူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သီးခြားအခြေခံမူများနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကား၊ တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများသည် ကွဲပြားပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွဲပြားကြပြီး ကိစ္စအများစုတွင် ၎င်းတို့ကို အခြားလူမျိုးများနှင့်လည်း မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အချို့သော လက္ခဏာများ ကွဲပြားပြီး တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကို လက်ခံ သို့မဟုတ် စွန့်လွှတ်နိုင်သည်။ ဒါဆို ဒီအချက်တွေထဲက ဘယ်ဟာက အမျိုးသားရေးလက္ခဏာအတွက် မရှိမဖြစ် စံသတ်မှတ်ချက်တွေလဲ။
ဤသည်မှာ ဂျူးလူမျိုးများ၏ ဆက်စပ်မှုတွင်လည်း ရှိသည်။ ဘာသာရေးအရ ဂျူးလူမျိုးကို သတ်မှတ်ရန် အလွန်လွယ်ကူသည်။ mitzvos ကိုစောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်ရှိသူများသည်ဂျူးအထောက်အထားရှိသည်။ မစ်ဇ်ဗို မည်မျှ စောင့်ကြည့်ရမည်နည်း။ ဤမေးခွန်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှုပ်ထွေးသောမျိုးဆက်တွင် ပို၍ပို၍ရှုပ်ထွေးလာသော်လည်း ၎င်းသည် ဒုတိယအဆင့်မေးခွန်းဖြစ်သည်။ မူအရ mitzvos ကို ကတိကဝတ်ပြုခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက် လုံလောက်သော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဟာလခီစကားရပ်တွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို မေးခွန်းထုတ်ခြင်းမှာ ဘာသာရေးတွင်ပင် အရေးမပါပေ။ ဘာသာရေးတာဝန်ဝတ္တရား အမျိုးအစားအားလုံးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဟာလခရစ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရှိပြီး၊ မည်သူကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်၊ မည်သူနှင့် ချည်နှောင်ထားကြောင်း၊ ဘာသာရေးဝိသေသလက္ခဏာဆိုင်ရာမေးခွန်းများသည် Torah-halakhic အယူအဆများကမ္ဘာတွင် တိုက်ရိုက်မပေါ်ပေါက်ပါ။
ဘာသာရေး လက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအတွက် ဟာလခ အရေးမကြီးပါက၊ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းမှာ လွယ်ကူပြီး အကျုံးဝင်ပါသည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားလက္ခဏာတစ်ခုရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း၏ halakhic အကျိုးဆက်ကား အဘယ်နည်း။ ဟာလခ၌၊ မစ်ဇ်ဗို့စ်ကို စောင့်ကြည့်သူ မည်သည် မစောင့်ထိန်းသနည်းဟူသော မေးခွန်းသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ထို့ထက်ပင် မည်သူက ၎င်းတို့ကို စောင့်ထိန်းရမည် သို့မဟုတ် မစောင့်ရဟူသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း မေးခွန်းတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဟာလာခစ်အဖြေမရှိသည့်အပြင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ဟာလာခရစ်သက်ရောက်မှု မရှိပါ။
Halakhic ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ဂျူးတစ်ဦးသည် ဂျူးမိခင်မှ မွေးဖွားလာသူ သို့မဟုတ် မှန်ကန်စွာကူးပြောင်းသူဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ halakhic သဘောတရားအရ သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်ပြီး သူဘာလုပ်သည်ဖြစ်စေ အထူးသဖြင့် mitzvos ကို သိမ်းဆည်းသည်ဖြစ်စေ မသိမ်းသည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါ။ ဟက်ဟက်ပက်ပက်အားဖြင့် သူသည် ၎င်းတို့အား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့ မလုပ်သောသူသည် ရာဇ၀တ်ကောင် ဟုတ်မဟုတ်၊ သူ့ကို မည်သို့ ပြုသင့်သည်ကို ဆွေးနွေးရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် သူ့အထောက်အထားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်တာက အရေးမကြီးပါဘူး။ "အစ္စရေးတစ်ပြည်လုံးမှ ထွက်လာသည်" ကဲ့သို့သော စကားစုများသည် အများအားဖြင့် တုပထားသော စကားများဖြစ်ပြီး ဟာလာခဟ်တွင် အမှန်တကယ် လက်တွေ့ကျသော သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းတို့တွင် အဓိပ္ပါယ်အချို့ရှိလျှင်ပင်၊ ဟာလခသည် ၎င်းတို့အား ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်သည်။
National Identity- သဘောတူညီချက်များနှင့် အခြေအနေများကြား ခြားနားချက်
ယခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် halakhic-ဘာသာရေးရှုထောင့်မှနေ၍ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း မေးခွန်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။ ယေဘူယျဒဿနအမြင်အရ၊ အဓိကစိတ်ဝင်စားမှုမှာ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးတွင် မဟုတ်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာသည် မရေမတွက်နိုင်သော ခက်ခဲသော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွန်ကဲသော ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ရပ်ကို အဓိကအားဖြင့် အာရုံစိုက်ပါမည်- အများသဘောဆန္ဒ (သမားရိုးကျ) ချဉ်းကပ်မှုနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော (essentialist) ချဉ်းကပ်မှု။
အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာဆိုင်ရာ မေးခွန်းသည် ခေတ်မီပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော မေးခွန်းအသစ်ဖြစ်သည်။ ဝေးကွာသောအတိတ်ကာလတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လူတို့သည် ၎င်းတို့၏ အမျိုးသား လက္ခဏာ မည်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ရမည်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ မေးခဲကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးက ပိုတည်ငြိမ်တယ်၊ လူတွေက သူတို့ရဲ့ဘ၀မှာ အပြောင်းအလဲများစွာ မလုပ်ခဲ့ကြသလို သူတို့ရဲ့ အထောက်အထားတွေကို ပြိုင်ဆိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၏ ကွဲပြားသော အယူအဆမှာ ၎င်းတို့၏ အသိစိတ်တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီး ယင်းဝိသေသလက္ခဏာတွင် အပြောင်းအလဲများ ရှိလျှင်ပင် ၎င်းတို့သည် အလိုလို သဘာဝအလျောက် မသိစိတ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပါသည်။ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာသည် အထက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် မိသားစုဆိုင်ရာ လက္ခဏာများနှင့် ဆင်တူသည်။ လူအများစုသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမှတ်အသားတစ်ခုရှိသောကြောင့် ဘာသာရေးနောက်ခံသည် စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ရှေးကမ္ဘာ၌ ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းသည် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရန် မွေးဖွားလာသူတို့အား ဘုရားသခင်ထံမှ လက်ဆောင်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးသားရေးနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လက္ခဏာနှင့် ဆက်နွယ်မှုလည်း ရှိသည်ဟု အယူအဆတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဤအရာများအားလုံးကို ကမ္ဘာဦးခြောက်ရက်အတွင်း ကမ္ဘာနှင့် ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး၊
ဥရောပနှင့် ကမ္ဘာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးသားရေးဝါဒ ထွန်းကားလာမှုနှင့်အတူ ယနေ့ခေတ်တွင် မေးခွန်းသည် အင်အားအပြည့်ဖြင့် မျှောပါလာသည်။ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကို သတ်မှတ်ရန် ခက်ခဲမှုသည် မဏ္ဍိုင်နှစ်ခုကြားတွင် အများစုဖြစ်သည့် အဖြေများ ထွက်ပေါ်လာသည်- ပထမမှာ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကို ထင်သလိုနီးပါး သဘောတူညီချက်အပေါ် အခြေခံသည့် သမားရိုးကျဝါဒီများဟု မြင်သည်။ အုပ်စုတစ်ခုသည် လူအဖြစ်မြင်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြာမြင့်ပါက၊ ယင်းမှာ လူဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ပြီးနောက် ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ကဗျာဆရာ Amir Gilboa က အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့သည်- "လူတစ်ဦးသည် နံနက်ယံ၌ ရုတ်တရက်ထ၍ လူတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု ခံစားမိ၍ လမ်းလျှောက်တတ်၏။" အခြားဝင်ရိုးစွန်းမှာ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကို သဘာဝကျပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသဖွယ် မြင်နိုင်သော ခိုင်မာသော ခံယူချက်ဖြစ်သည်။ ထိုတွေ့ရခဲသော "သဘာဝ" ဒြပ်စင်၏ သဘောသဘာဝကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ပို၍အံ့သြလာသောအခါ၊ အမျိုးသား၊ အချစ်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် လောကုတ္တရာပညာသို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုများအရ၊ နိုင်ငံသားသည် တစ်နည်းအားဖြင့် လောကုတ္တရာ တည်ရှိမှု ရှိပြီး ပလပ်တနစ် အယူအဆကဲ့သို့ တစ်ခုခုနှင့် လူမျိုးကို ပေါင်းစည်းထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ယင်းနှင့် လောကုတ္တရာ ဆက်စပ်မှုကြောင့် ဤအရာတွင် ပါဝင်သည်။ မြင်းတစ်ကောင်စီသည် မြင်းဟူသည် အတိအကျသတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်ဘဲ မြင်းအုပ်စုဝင်များဖြစ်သည်။ သူက မြင်းတစ်ကောင်ပဲ၊ ဒါပဲ။ အလားတူ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံတိုင်းသည် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှ ကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘဲ ဘယ်လ်ဂျီယံအုပ်စုတွင် ရှိသည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်ခက်ခဲသောကြောင့်သာမက၊ မလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဝိသေသန သည် ကိုယ်ပိုင် နှင့် မိသားစု လက္ခဏာ ကဲ့သို့ သဘာဝ အယူအဆ တစ်ခု ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားနိုးထမှုကိုဖော်ပြသည့် Amir Gilboa ၏စကားများသည် ကြီးမားသော-လောကုတ္တရာပဋိသန္ဓေဘောင်အတွင်း၌လည်း ရေးသားထားနိုင်သည်ကို နားလည်ရန် အရေးကြီးသည်၊ သို့သော် ဤနေရာတွင် ၎င်းသည် အတွေ့အကြုံအရ နိုးထခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ယခင်က မြုံနေသည့် အလားတူ လောကုတ္တရာအမှန်တရားသည် လူတို့၏အသိစိတ်အတွင်းသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာနိုင်သည်။ . ၎င်းသည် ၎င်းတို့တွင် နိုးကြားလာပြီး ခိုင်မာသော အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အာရုံများဖြင့် လက်တွေ့တွင် ၎င်းကို သိရှိလိုကြသည်။ လူသည် ရုတ်တရက်ထ၍ လူဖြစ်၏ဟူသော လောကုတ္တရာအမှန်တရားကို ခံစား၍ လျှောက်လှမ်း၏။ အမျိုးသား နိုးကြားသူ အမျိုးသား၏ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွင် မေ့မြောခြင်းမှ နိုးထလာသော ခံစားချက်ဖြင့် နိုးထလာသော ကြည်ကြည်သာသာ ပဋိသန္ဓေနေခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ချီတက်ပွဲ စတင်ရန် မြေပြင်မှ တက်လာခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ တည်ထောင်မှုသည် နိုးကြားခြင်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းခြင်းဟုတ်၊
အမျိုးသားလက္ခဏာ- အများသဘောတူချဉ်းကပ်မှုနှင့် ၎င်း၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု
မြေပုံ၏သဘောတူထားသည့်ဘက်တွင် သူ၏သြဇာကြီးစာအုပ်တွင် Benedict Anderson ကဲ့သို့သော တွေးခေါ်ရှင်များရှိသည်။ စိတ်ကူးယဉ်အသိုင်းအဝိုင်းများ (၁၉၈၃) နှင့် အခြားများစွာ လိုက်ပါခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံသားနှင့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများကဲ့သို့သော အယူအဆများ၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိကြောင်း ငြင်းဆိုထားသည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုကို စွဲကိုင်ထားသူများသည် ၎င်းတို့၏ (များသောအားဖြင့် မျှဝေလေ့ရှိသည်) သမိုင်းတစ်လျှောက် အချို့သောအုပ်စုများ၏ အသိစိတ်တွင် ဖန်တီးကာ သရုပ်ဖော်ထားသော ထင်သလိုဖန်တီးထားသော စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုတစ်မျိုးအဖြစ် နိုင်ငံသားအဖြစ် မြင်သည်။ ဤနိုးထမှုသည် တရားမ၀င်ကြောင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏တောင်းဆိုချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များကို လျှော့တွက်နိုင်သည်ဟု မဆိုလိုကြောင်း နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ကျိန်းသေမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိပြီး လူအများအတွက် အရေးကြီးသောကြောင့် ၎င်းကို လေးစားထိုက်သည်ဟု လူအများက ယုံကြည်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တန်းတော့ ဒါဟာ ထင်သလို ဖြစ်မလာပါဘူး။ ဤချဉ်းကပ်မှု၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ထက်မြက်စေရန်၊ ဤနေရာတွင် မျက်မှောက်ရေးရာအတွက် စာပိုဒ်အနည်းငယ်ကို ရေးထားလျှင် စာဖတ်သူသည် ကျွန်ုပ်အား ခွင့်လွှတ်ပါလိမ့်မည်။
အများသဘောတူကျောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောချဉ်းကပ်မှု၏ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဥပမာတစ်ခုမှာပါမောက္ခ Shlomo Zand ၏အမြင်ဖြစ်သည်။ Zand သည် Tel Aviv တက္ကသိုလ်မှ သမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်ပြီး ယခင်က Compass စက်ဝိုင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစ္စရေးရှိ အစွန်းရောက် လက်ဝဲစက်ဝိုင်းများတွင် ပါ၀င်သည်။ သူ့အငြင်းပွားစရာစာအုပ် ဂျူးလူမျိုးများကို မည်သည့်အချိန်နှင့် မည်သို့တီထွင်ခဲ့သနည်း။ (နပန်းပွဲ၊ 2008)၊ Zand သည် Benedict Anderson ၏စာတမ်းကို အထူးစိန်ခေါ်သည့် ဥပမာတစ်ခုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဂျူးလူမျိုးများသည် စိတ်ကူးယဉ်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထိုနေရာတွင် သက်သေပြရန် ကြိုးစားနေပါသည်။ Anderson ၏ ရပ်တည်ချက်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်သည် မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ ၎င်း၏စာတမ်းနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော (အနောက်ကမ္ဘာ) တွင် ဥပမာတစ်ခုရှိပါက ၎င်းမှာ ဂျူးလူမျိုးများဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင် (အခြားများစွာသောအမြင်တွင်) Zand ၏စာအုပ်သည် သမိုင်းသုတေသနအတွက် နာမည်ဆိုးတစ်ခုပေးထားပြီး အထူးသဖြင့် အတွေးအခေါ်နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနအကြား အခြေခံနှင့် အရေးကြီးသော ကွဲပြားမှုကို ပျက်ပြားစေသည်။ သို့သော် ဤအရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေခြင်းသည် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၏ မွေးရာပါ ကွဲလွဲချက်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိဖြစ်ရပ်တွေကို ဆက်လုပ်နေရင်၊ အန်ဒါဆင်ရဲ့အမြင်ကို ကောင်းကောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့ အခြားဝင်ရိုးစွန်းက ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတစ်ခုကတော့ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေပါပဲ။ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများသည် စိတ်ကူးယဉ်ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုအပေါ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအခြေခံထားသူများဖြစ်သည် (တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖိလိတ္တိလူများ သို့မဟုတ် သမ္မာကျမ်းစာဆိုင်ရာ ခါနနိလူများ သို့မဟုတ် အစောပိုင်းခေတ်အထိပင်)၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများတွင် ဘာမှမရှိသလောက်ကို ဖန်တီးထားသည်။
ဤနေရာတွင် အများသဘောတူသော ပဋိသန္ဓေနေခြင်း၏ သာမာန်သက်ရောက်မှုကို ထောက်ပြခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိပေသည်။ သူ့စာအုပ်၏အစတွင် Zand သည် ဤစာအုပ်ကို ရည်ညွှန်းသည်- "ကျွန်ုပ်နေထိုင်သည့်နေရာမှ ဝေးကွာသောပစ္စုပ္ပန်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော အယ်လ်ရှိတ်မူယာနစ်မြို့ခံများအား အောက်မေ့သတိရခြင်း"။ လေသံက သရုပ်ဖော်ပြီး ဣနြေ္ဒရရနဲ့ သူ့မျက်နှာမှာ အဲဒါကို ပြဿနာလို့ မမြင်ဘူး။ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများသည် မွေးရာပါ စိတ်ကူးယဉ်နေပါက၊ စိတ်ကူးယဉ်ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုသည် အခြားတစ်ခုကို တွန်းပို့နေသည်။ လာပြီးတော့ ပျောက်သွားတယ်။ ဤသည်မှာ လောက၏လမ်းစဉ်ပင်။ သူ့အဆိုအရ၊ ဒါတွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီး လောကုတ္တရာတန်ဖိုးတွေ ဒါမှမဟုတ် အမှန်တရားတွေမဟုတ်ဘဲ သမိုင်းဆိုင်ရာအမှန်တရားတွေတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်မှာ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည်ဟု မြင်သည့် သမားရိုးကျငွေကြေး၏ အခြားတစ်ဖက်ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်ချက်မှာ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာသည် အမှန်တကယ်တွင် ထင်သလိုပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်ပါက၊ ယုတ်ညံ့သော ကောက်ချက်နှစ်ခု (မလိုအပ်သော်လည်း) ရေးဆွဲနိုင်သည်- ၁။ ထိုသို့သော အဖွဲ့အစည်းများသည် စစ်မှန်သောအခွင့်အရေး မရှိပါ။ လူမျိုးများသည် ကျောရိုးမရှိသော သတ္တဝါများဖြစ်ပြီး လူတို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းအပြင်ဘက်တွင် တည်ရှိခြင်းမရှိပေ။ 1. အမျိုးသားရေးလက္ခဏာသည် လူများစွာတို့၏ အမှတ်သညာ၏ အဓိကကျသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်တွင် အခြားအမျိုးသားရေးလက္ခဏာ (အခြေခံအားဖြင့် အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်) ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် စိတ်ကူးယဉ်ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်သည်ဟူသောအချက်သည် ထိုအရာများ၏ တောင်းဆိုချက်များနှင့် တောင်းဆိုမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ လျှော့တွက်ပါ။
အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်၊ ဤချဉ်းကပ်မှု၏ပိုင်ရှင်အနည်းငယ်သည် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ (Zand၊ Israeli-Jewish ဖြစ်ရပ်တွင်) ကိုဝေဖန်ရန် ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့အား အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုပြီး ၎င်းတို့ကို ထင်သလို စိတ်ကူးယဉ်သော လူမှုရေးစည်းဝေးကြီးတစ်ခုအား လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စေခြင်း၊ သိရန် တီထွင်ခြင်း၊ အခြား စိတ်ကူးယဉ် လက္ခဏာ ( Zand ၏ ဥပမာ ပါလက်စတိုင်း ) ၏ တူညီသော အမြင် အထူးသဖြင့် ဂျူးလူမျိုးများသည် အအောင်မြင်ဆုံး ဥပမာများဖြစ်ပြီး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများသည် စိတ်ကူးယဉ် အမျိုးသားရေးဝါဒ၏ အရှင်းလင်းဆုံး ဥပမာများဖြစ်သောကြောင့် အဓိပ္ပါယ်မဲ့သည့်အရာမှာ ပိုမိုဆိုးရွားပါသည်။ ဤအရာသည် စံတန်ဖိုး-နိုင်ငံရေးမေးခွန်းဖြစ်သောကြောင့် ဤအသိုက်အဝန်း၏ နိုင်ငံရေးအသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် သင့်လျော်သော ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုကို ဆွေးနွေးရန် မရည်ရွယ်ကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲ အလေးပေးဖော်ပြပါမည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် သမိုင်း-ယဉ်ကျေးမှု ဖော်ပြချက်နှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် ညီညွတ်မှုမရှိခြင်းကိုသာ ဝေဖန်ပါသည်။
အမျိုးသား အထောက်အထား- မရှိမဖြစ် ချဉ်းကပ်မှု
အခုအချိန်အထိ သမားရိုးကျဝါဒနဲ့ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ သဘောသဘာဝကို ကျွန်တော် ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ ဤအခက်အခဲများကြောင့် အချို့သူများသည် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၏ သဘောတရားကို လောကုတ္တရာနယ်ပယ်သို့ ယူဆောင်သွားကြသည်။ ဥရောပရှိ အမျိုးသားရေးနိုးထမှုအပြင် ဇီယွန်ဝါဒီလှုပ်ရှားမှုတွင် ထင်ဟပ်သည့် ဂျူးအမျိုးသားနိုးထမှုအပြင် ဥရောပအမျိုးသားရေးဝါဒ၏ လွှမ်းမိုးမှုလည်းရှိသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုများသည် အမျိုးသားရေးဝါဒကို လောကုတ္တရာဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအချို့ (ပြည်သူ၊ လူမျိုး) တွင် အခြေပြုသည်ဟု မကြာခဏ ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဤအမြင်၏ လွန်ကဲသောအသုံးအနှုန်းများသည် ဖက်ဆစ်အသုံးအနှုန်းများ (ဟစ်တလာ၏ဂျာမနီတွင်၊ Bismarck နှင့် ၎င်းတို့ရှေ့မှများစွာသော၊ အပြင် Garibaldi ၏အီတလီနှင့်အခြားအရာများ) တွင်ပေါ်လာသည်။ ဤသဘောထားများကို အရှင်ဘုရား ကုက္ကုနှင့် သူ၏ တပည့်များ ၏ Torah အတွေးတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဤလောကုတ္တရာဆိုင်ရာ အယူအဆကို လက်ခံခဲ့ကြပြီး ယင်းကို ဂျူးဘာသာ၏ အနှစ်သာရအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ဂျူးလူမျိုး၏ မီးပွား၊ မှိန်၊ လျှို့ဝှက်၊ ငြင်းဆိုခြင်းနှင့် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းဟူသည် လူတစ်ဦး၏ ဂျူးဘာသာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ သီလနှင့် ဂျူးတိုင်း၏ မွေးရာပါ မျိုးရိုးဗီဇ ထူးခြားမှုသည် အထူးသဖြင့် ရိုးရာဝိသေသလက္ခဏာများ (စောင့်ထိန်းခြင်း) ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ဘုံပိုင်းခြေအဖြစ်မှ ရပ်စဲသွားသောအခါတွင် ဂျူးဘာသာအတွက် သီးသန့်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုနီးပါး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ "ဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်" သည် နိမိတ်ဖတ်ခြင်းမှ ဂျူးတို့၏ လောကုတ္တရာစိတ်ကူး၏ ရှုထောင့်တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်သည် ကြည်ကြည်ဖြူစင်မှုကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် ခိုင်လုံသောချဉ်းကပ်နည်းကို တင်ပြထားသော်လည်း သမိုင်းဝင်ရိုးတွင် ခိုင်လုံသော (အမြဲမဟုတ် လောကုတ္တရာ) ပဋိသန္ဓေနေခြင်းသည် သမားရိုးကျဝါဒထက် သာလွန်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ၊ ၎င်းသည် ခိုင်မာသောချဉ်းကပ်မှုများကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် သမားရိုးကျချဉ်းကပ်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ခိုင်လုံသောချဉ်းကပ်မှုကို ခေတ်သစ်ဝါဒနှင့် အမျိုးသားရေးနိုးကြားမှုတို့ဖြင့် အလွန်အမင်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါက သမားရိုးကျဝါဒသည် ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒဟု လူသိများသော အနေအထားဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် ခေတ်လွန်အမျိုးသားရေး “ဝေဖန်ချက်အသစ်” ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
အခုထိတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဘက် အမြင်နှစ်ခုကို ဖော်ပြပြီးပါပြီ။ ဘယ်မှာ တိုက်မိကြလဲ။ သူတို့ကြားက ကွာခြားချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ ဒီအဆင့်မှာ ကျွန်တော်တို့ အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒုတိယချဉ်းကပ်မှု၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဦးစားပေးများသည် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ရှာဖွေခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အဆိုအရ၊ လောကုတ္တရာ အယူအဆ (အစ္စရေးဘုရင်မင်းမြတ်) သည် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်သည်။ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများတွင်ပင် “ဣသရေလအမျိုးအနွယ်” ဟူသော အငြင်းအခုံကို အဖန်ဖန် အထပ်ထပ်ကြားနေရပြီး ကူးပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် တောင်းဆိုသည့် အခြေခံအဖြစ် အရှင်ဘုရားကုက္ကုနှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအဝိုင်းများမှ အများစုသည် အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဂျူးများဟု သတ်မှတ်သည့် လောကုတ္တရာပညာဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရိုဂရမ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအတွက် လိုအပ်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ လောကုတ္တရာ အချစ်များအတွက်၊ ဂျူးအထောက်အထားသည် အကြောင်းအရာ၊ တန်ဖိုးထားမှုများ သို့မဟုတ် အခြားစံနှုန်းများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် သာလွန်သောအချက်ဖြစ်သည်။ ဂျူးတိုင်းသည် Torah ၏တန်ဖိုးများနှင့် mitzvos များကို လိုက်နာရမည်ဟု ထိုသို့သောသဘောထားရှိသူများသည် ယုံကြည်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ဂျူးလူမျိုးအဖြစ် သူ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ၎င်း၏အထောက်အထားနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
အမှန်ပင်၊ မရှိမဖြစ်-လောကုတ္တရာသဘောတရားများအတိုင်းပင်၊ ဂျူးအမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၏ မတူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများကို အဆိုပြုနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏အမြင်တွင် ယင်းတို့သည် ဆက်နွှယ်နေသော ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံတော်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အရေးမကြီးပေ။ ၎င်းတို့ကို မစောင့်ထိန်းသူများပင်လျှင် ဂျူးတို့၏ လောကုတ္တရာ အယူအဆအရ ဂျူးများပင် ဖြစ်ကြပါသည်။ မမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ ဝိသေသနမေးခွန်းသည် ရိုးရာတွေးခေါ်မှုနှင့် ခြားနားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ သမားရိုးကျ ချဉ်းကပ်မှုရှိသူများ၊ လောကုတ္တရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို မယုံကြည်သူများသည် ဤအမျိုးသားရေးလက္ခဏာနှင့် သက်ဆိုင်သူ မည်သူကို မည်သူက မဆုံးဖြတ်နိုင်သော အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘာကြောင့် ဂျူးတွေဖြစ်တာလဲလို့ မေးကြတယ်။ လောကုတ္တရာတရားမဟုတ်ရင် ဘာလဲ၊ သို့သော် သမားရိုးကျဝါဒီများသည် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာမတွေ့သောကြောင့် စိတ်ကူးယဉ်ဝိသေသလက္ခဏာ၏ ခံယူချက်ဆီသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အများအပြားသည် ကျွန်ုပ်တို့မတိုင်မီ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ဇာတိလက္ခဏာ၏ ဆက်နွှယ်ပုံမပေါ်သည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို လက်ခံကြသည်။ Amos Oz ၏စာအုပ်များကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ ဟေဗြဲဘာသာစကားပြောခြင်း၊ စစ်တပ်တွင်အမှုထမ်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံတော်အတွက်သင့်လျော်သောအခွန်များပေးဆောင်ခြင်း၊ မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းတွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် Torah အရင်းအမြစ်များမှလှုံ့ဆော်ခံရခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် ယနေ့ခေတ်ဂျူးလူမျိုး၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက် ဘုံသမိုင်းနှင့် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အမှန်စင်စစ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်တွင် ဂျူးလူမျိုးများကို အမှန်တကယ်လက္ခဏာဆောင်သည့်အရာဖြစ်သည် (အားလုံးမဟုတ်သော်လည်း သေချာသည်)။ သို့ဆိုလျှင် သူတို့၏အမြင်တွင် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာသည် လောကုတ္တရာနည်းလမ်းအတိုင်းပင်၊ ဤနေရာ၌ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-သမိုင်းဆိုင်ရာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီး လောကုတ္တရာအမှန်မဟုတ်သည့်အချက်မှတပါး၊
သမားရိုးကျ ချဉ်းကပ်နည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းနှစ်ခု ပေါ်လာသည် ။
ဤအမျိုးသားရေးလက္ခဏာသည် မည်သည့်သဘောဖြင့် ၎င်း၏ယခင် သရုပ်ဖော်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသနည်း။ စိတ်ကူးယဉ်ဝိသေသလက္ခဏာသည် စဉ်ဆက်မပြတ်တည်မှုအတွက် အခြေခံဖြစ်လျှင် မလုံလောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အုပ်စုကို ဦးစွာသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမှသာ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကား အဘယ်နည်းဟု မေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် လက္ခဏာတွေ မတည်ရှိသရွေ့ အဖွဲ့ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ။ ဤမေးခွန်းသည် ကျေနပ်လောက်သော အဖြေမရှိပါက ကျန်ရှိနေသော မေးခွန်းဖြစ်ပြီး အများသဘောတူသော ပုံတွင် ၎င်းအတွက် ကျေနပ်လောက်သော အဖြေမရှိနိုင်ပါ။ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရာထူးကို ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် ယင်းမေးခွန်းအတွက် လုံးဝအနှောက်အယှက်မရှိမှတပါး၊ ဤမေးခွန်းအတွက် အဖြေမရှိပါ။
ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် အမှန်တကယ် "အလုပ်" ဖြစ်ပါသလား။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် မည်သည့်ဝေဖန်စမ်းသပ်မှုမျှအထိ မခံမရပ်နိုင်ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုထားသော ဆက်တင်များကို စဉ်းစားပါ။ ဟေဗြဲဘာသာစကားဖြင့် ပြောဆိုခြင်းသည် ဂျူးများကို သေချာပေါက် ခွဲခြားရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင် ဟေဗြဲဘာသာစကားကို မပြောသော ဂျူးများစွာလည်း ရှိပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ဆက်စပ်မှုပင်လျှင် ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ (ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ၎င်းနှင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ဆက်စပ်နေပြီး ဂျူးများစွာသည် ၎င်းနှင့် လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိပါ)။ အခွန်ငွေပေးဆောင်ခြင်းနှင့် စစ်မှုထမ်းခြင်းများသည် ဂျူးတို့၏လက္ခဏာရပ်မဟုတ်သည်မှာ သေချာပေါက်ဖြစ်သည် (Druze၊ အာရပ်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် အခြားဂျူးမဟုတ်သောနိုင်ငံသားများသည် ယင်းကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ကြသည်)။ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်၊ မကျင့်သော ဂျူးကောင်းအနည်းငယ်ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ ဂျူးဘာသာကို မည်သူမျှ သံသယမရှိပါ။ မူရင်းဘာသာစကားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ Amos Oz နှင့် သမ္မာကျမ်းစာကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဖတ်ရှုကြသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင် ရေးထားသော စာပေများသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ဂျူးလူမျိုးများလည်း ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။ ဒါဆို ဘာကျန်သေးလဲ။
ဤနေရာတွင် မှတ်သားရန် အရေးကြီးသည်မှာ အခြားလူမျိုးများ၏ စုပေါင်းစရိုက်လက္ခဏာဟု ဆိုနိုင်သကဲ့သို့ ဂျူးလူမျိုးတို့၏ စရိုက်လက္ခဏာများ မုချရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့် စရိုက်လက္ခဏာတွေက တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ ထပ်တူမကျပါဘူး။ ထို့အပြင်၊ စရိုက်လက္ခဏာတစ်ခုအကြောင်းပြောရန်အတွက် ၎င်းတွင်ပါဝင်သောအုပ်စုကို ဦးစွာသတ်မှတ်ရမည်။ အမှန်တော့၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဂျူးအက္ခရာတစ်ခု၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အောက်တွင် ကျရောက်နိုင်သော စရိုက်လက္ခဏာရှိသော လူများစွာရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ဂျူးများဖြစ်သည်ဟု မည်သူမျှ မပြောနိုင်ပေ။ ဂျူးလူမျိုးမည်သူဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးမှသာ ဂျူးအုပ်စုကိုကြည့်ရှုပြီး ၎င်းတို့အား စရိုက်လက္ခဏာရှိမရှိ မေးမြန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဂျူးသမိုင်းနှင့် ယေဘူယျမူလလည်းရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ဖြစ်ရပ်မှန်များသာဖြစ်သည်။ ဒါတွေအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးကို မြင်ဖို့ခက်ပါတယ်၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ ဖြစ်တည်မှုပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလိုတဲ့ အရာတစ်ခုအဖြစ် ဘာကြောင့်ထင်မြင်ရသလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ဂျူးအများစုတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် မူလဇစ်မြစ်နှင့် သမိုင်းကြောင်းရှိကြသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်သလဲ? မျိုးရိုးစဉ်ဆက်နှင့် သမိုင်းကြောင်းအရ တစ်စုံတစ်ဦးမှ ဂျူးလူမျိုးဟု ဆိုရန် နေရာရှိပါသလား။ သူဒီလိုဖြစ်ရင် သူလည်းဒီလိုပါပဲ၊ မဟုတ်ရင် မဟုတ်ဘူး။
သို့ဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်ပွင့်လင်းပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လာလျှင်ပင်၊ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို အမျိုးသားဂျူးတစ်ဦးအတွက် တန်ဖိုးရှိသောသဘောဖြင့် အများသဘောတူချဉ်းကပ်မှုတွင် ပြတ်သားသောစံနှုန်းတစ်ခုကို လက်ညှိုးထိုးရန် ခက်ခဲနေသေးသည်။ ပေးထားသောစာရင်းတစ်ခုမှဝိသေသလက္ခဏာအချို့တည်ရှိနေခြင်းသည် ဂျူးလူမျိုးတစ်ဦး၏စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (နှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ) ရောဂါရှာဖွေရေးတွင် လက်ခံထားသောနည်းလမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံသင့်သည်ဖြစ်နိုင်သည် ။ အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း၊ ဒါကို ကျေနပ်လောက်တဲ့ စံနှုန်းအဖြစ် မြင်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ငါတို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်က ဒီလိုစာရင်းပေးနိုင်မလား။ ခုနစ်ခု သို့မဟုတ် ငါးခုထက် ဤဂုဏ်ရည်စာရင်းခြောက်ခုကို အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ရှင်းပြနိုင်မလား။ ထို့အပြင်၊ ဤစံနှုန်းသည် ဂျူးများနှင့် ဂျူးမဟုတ်သူများကို ယုံကြည်လောက်သောနည်းဖြင့် ခွဲခြားရာတွင် အမှန်တကယ် အောင်မြင်မည်လား။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ပါ (အထက်ပါဥပမာများကိုကြည့်ပါ)။
ဤပြဿနာရှိသော သဘာဝကြောင့်၊ သမားရိုးကျသမား အများအပြားသည် ဤနေရာတွင် ဟာလာခစ်မျိုးရိုးဗီဇနယ်ပယ်သို့ ပြန်လာကြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည်လည်း မိခင်၌ရှိသော ဂျူးလူမျိုးကို ရှာဖွေနေကြသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အခြားသူများက ယင်းကို လူတစ်ဦး၏ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်တွင် ချိတ်ဆွဲထားလိမ့်မည်- ဂျူးတစ်ဦးသည် ခံစားရပြီး သူ့ကိုယ်သူ ဂျူးလူမျိုးဟု ကြေညာသူဖြစ်သည်။ ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၏ အဝိုင်းသဏ္ဍာန်နှင့် အလွတ်သဘောသည် သမားရိုးကျသမားများကို အမှန်တကယ် စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါ။ သဘောတူညီချက်များသည် ကွန်ဗင်းရှင်းတစ်ခုအား လက်ခံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ၊ စက်ဝိုင်းပုံ သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်မရှိသည့်အချိန်တိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ယင်း၏တရားဝင်မှုသည် ၎င်းတို့သဘောတူထားသည့်အချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စိတ်ကူးယဉ်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုသည် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာကို စိတ်ကူးယဉ်စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံရန် ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ဤအငြင်းပွားမှုများအားလုံးအပြင်၊ ၎င်းသည် ဖြစ်ရပ်မှန်များ သို့မဟုတ် အချည်းနှီးသော ငြင်းခုံမှုများဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ဤပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်တည်မှုတင်းမာမှုကို သေချာပေါက်ရှင်းပြခြင်းမရှိပေ။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Rabbi Shach သည် ဂျူးလူမျိုး၏ဝိသေသလက္ခဏာ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို တိုက်ခိုက်ပြီး halakhic အသုံးအနှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် အခြေခံအားဖြင့် ခိုင်မာသော ရပ်တည်ချက် တစ်မျိုးကို တင်ပြသော်လည်း လောကုတ္တရာ (အချို့သော တန်ဖိုးများအတွက် ကတိကဝတ် စည်းကမ်းချက်များအရ အမျိုးသား လက္ခဏာ)။ Wikipedia တွင် Rabbi Shach ၏ ယုန်များ၏ မိန့်ခွန်းအပေါ် Rebbe of Lubavitch ၏ တုံ့ပြန်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
Lubavitcher Rebbe', Bar Plugata အရှင်ဘုရားသည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ဟောတော်မူခဲ့သော မိန့်ခွန်းကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ဥပုသ်နေ့ နောက်တော့ သူ့ခါးလယ်မှာ။ ဂျူးလူမျိုးကို မည်သူမျှ ကဲ့ရဲ့ရန် ခွင့်မပြုကြောင်း ရေဗဘီက ပြောသည်။ ဂျူးတို့၏အမြင်မှာ “ဣသရေလအမျိုးသည် အပြစ်ရှိသော်လည်း၊” ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် “တစ်ဦးတည်းသောသား” ဖြစ်သည်၊ ကဗျာ အပြစ်စီရင်ခြင်း၌ ဟောပြောသောသူသည်လည်း၊ ဂျူးတိုင်းသည် အရာအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်များ ဘာသာတရားသော်လည်းကောင်း မည်သို့မျှ မတိုက်ခိုက်။ Rebbe က သူ့တစ်ခေတ်လုံးကို "Udim မီးအရိပ်" နှင့် "ကလေးတွေကို ဖမ်းထားတယ်။“ဂျူးဘာသာအပေါ် သူတို့ရဲ့ အသိပညာနဲ့ သဘောထားကြောင့် အပြစ်မတင်ပါဘူး။
ဤသည်မှာ လောကုတ္တရာ အမျိုးအစားမှ တုံ့ပြန်မှု ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ထိုအချိန်က သမ္မတ Haim Herzog သည် Rabbi Shach ၏ စကားကို သမားရိုးကျ တုံ့ပြန်မှုကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး Kubilniks ၏ ဂျူးလူမျိုးများနှင့် နိုင်ငံတော်ကို ထူထောင်ပြီး စစ်တပ်တွင် အမှုထမ်းခဲ့သော လက်ထိတ်သည် မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကို တွေးတောမိသောအခါ၊ မေးခွန်းထုတ်သည်။ ဒါနဲ့ အရှင်ဘုရား ဘာပြင်ဆင်နေသလဲ။ သူသည် လောကုတ္တရာပညာကို လက်မခံသလို သမားရိုးကျသမားလည်း ဖြစ်လိုစိတ်လည်း မရှိပါ။ တတိယရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါသလား။
အဆုံးမရှိသော သဘောတရားများ မရှိပါလား။
ထင်ရှားသောနိဂုံးချုပ်ချက်မှာ ဂျူးအမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၏ အယူအဆသည် အကန့်အသတ်မရှိနိုင်ပေ။ သူ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုအတိုင်းအတာအရ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူညီသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်မှာ သေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ် သဘောတူရန်မှာ သေချာပေါက်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ အနည်းဆုံးအုပ်စုအများစုအတွက် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် မကိုက်ညီသူများကို ဖယ်ထုတ်ထားပုံမပေါ်ပါ။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ ပေါင်း တို့ သည် မိ မိ ဂျူး များ ဖြစ် သ ဖြင့်၊ ဂျူးလူမျိုး၏ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခု အမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းမရှိဟု ဆိုလိုခြင်းမှာ ထိုသို့သောဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုသည် စိတ်ကူးယဉ်ရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုသလော။ metaphysics သို့မဟုတ် halakhic formalism အတွက် တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုမှာ ဇာတ်ကြောင်းဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်တော်မသေချာဘူး။
ဤမေးခွန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤနေရာတွင် ဝင်ရောက်ရန်နေရာမရှိသော ဒဿနနယ်ပယ်ဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ခဏတာမျှသာ ထိတွေ့ရန် ကြိုးစားပါမည်။ အနုပညာ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၊ သိပ္ပံ၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော မရေရာသော အသုံးအနှုန်းများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။ သို့သော် ဤကဲ့သို့သော အယူအဆကို သတ်မှတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်သောအခါတွင် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အလားတူပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ အတော်များများက ဤအယူအဆများသည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည်ဟု ကောက်ချက်ချကြပြီး ၎င်းကို ပတ်ပတ်လည်တွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ပို့စ်မော်ဒန်နန်းတော် (Rabbi Shagar နှင့် သဘောတရားဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုသည် မတော်တဆမဟုတ်ပါ)။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဥပမာတစ်ခုကတော့ Gideon Ofrat ရဲ့ စာအုပ်၊ အနုပညာ၏အဓိပ္ပါယ်အနုပညာအယူအဆ၏ အမျိုးမျိုးသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များစွာကို ပေးဆောင်ကာ ၎င်းတို့ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သူ၊ သူသည် အနုပညာသည် ပြတိုက်တစ်ခုတွင် ပြသထားသည့်အရာဖြစ်သည် (!) နိဂုံးချုပ်လာသည်အထိ သူဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Robert M. Piersig သည် သူ၏ဘာသာတရားစာအုပ်တွင်ရှိသည်။ ဇင်နှင့်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနုပညာအရည်အသွေး၏ သဘောတရားကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် လိုက်ရှာနေသော Phydros အမည်ရှိ ဝေါဟာရပညာရှင် ပါမောက္ခတစ်ဦး၏ ကြီးမားသော ခရီးကို ဖော်ပြသည်။ တစ်ချိန်ချိန်၌ သူသည် ဉာဏ်အလင်းကို ရရှိပြီး ဂရိဒဿနသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အယူအဆတိုင်းတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိရမည်ဟူသော ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေခဲ့သည်၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိသော သဘောတရားသည် ရိုးရှင်းခြင်းမရှိပါ (စိတ်ကူးယဉ်ထားသည်)။ သို့သော် အရည်အသွေးကဲ့သို့ အယူအဆတစ်ခုသည် အဆုံးမရှိဟု ယူဆနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် စစ်မှန်သောအကြောင်းအရာမရှိသော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချရန် ငြင်းဆိုထားသည်။ စည်းဝေးပွဲမျှသာ။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ချိတ်ဆက်မှုများရှိကြောင်း ထင်ရှားပြီး အချို့သော ချိတ်ဆက်မှုများလည်း ရှိပါသည်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ ရှိသလို တန်ဖိုးနည်းတဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်ချက်မှာ အရည်အသွေး၊ သို့မဟုတ် အနုပညာကဲ့သို့သော သဘောတရားများသည် ခက်ခဲပြီး သတ်မှတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ တည်ရှိဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့က သေချာပေါက် စိတ်ကူးယဉ်တာမဟုတ်ဘူး။
အမျိုးသားရေး လက္ခဏာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလားတူ တောင်းဆိုချက်မျိုး ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။ လောကုတ္တရာပညာကို မလိုအပ်ဘဲ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Thesis ကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားဝိသေသလက္ခဏာများသည် မတူညီသော ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး ၎င်းအတွက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန် ခက်ခဲသော်လည်း ၎င်းသည် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ သို့မဟုတ် စည်းဝေးပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ မလိုအပ်ဘဲ၊ လောကုတ္တရာပညာနှင့်လည်း ပတ်သက်သည်ဟူ၍ မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန် ခက်ခဲသော သို့မဟုတ် မဖြစ်နိုင်သော အနုမြူအစစ်အမှန်အယူအဆတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ အလားတူ ခိုင်လုံသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် Rabbi Shach ၏ သန္ဓေတည်ခြင်းကို နောက်ခံထားသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည် (သူသည် halakhic အဓိပ္ပါယ်ကို အဆိုပြုသော်လည်း၊ အခြားသော အမျိုးသားရေး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို လက်မခံပါ)။ ဂျူးလူမျိုး၏ အဓိက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုရှိပြီး ၎င်းကိုအခြေခံ၍ လူတို့တောင်းဆိုမှုများပင် ရှိကြောင်း ၎င်းက စောဒကတက်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ လောကုတ္တရာပညာကို ကျေနပ်ဖွယ်ရွေးချယ်စရာအဖြစ် မမြင်ပေ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ အဲဒီလို မထင်ပါဘူး။ လောကုတ္တရာပညာမရှိရင် လူမျိုးတစ်မျိုးကို အတ္တဗေဒသဘောအရ ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲဆိုတာ မမြင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများက ဒါကို သဘောမတူတာတော့ ရှင်းပါတယ်။
အခုထိ ဒဿန။ သို့သော် ယခုတွင် နောက်မေးခွန်းတစ်ခု ရောက်လာသည်- ဤအရာအားလုံးသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျူးလူမျိုး၏ဝိသေသလက္ခဏာကို အဘယ်ကြောင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန် သို့မဟုတ် နားလည်ရန်ပင် ကြိုးစားသင့်သနည်း။ ကျွန်တော့်အဖြေကတော့ လုံးဝအရေးမကြီးပါဘူး။ ဤမေးခွန်းအတွက် သက်ရောက်မှုမရှိပါ၊ ၎င်းသည် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှု၏ အများစုဖြစ်သည် (များသောအားဖြင့် မြုံနေပြီး အကြောင်းအရာချည်းပင် ဖြစ်နိုင်သည်)။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် လက်တင်ကုလားထိုင်၏ စိတ်ပညာ၌ အပြစ်ကျူးလွန်မိပါက၊ ဂျူးလူမျိုးတစ်ဦးကို ရှာဖွေခြင်းသည် ၎င်းတို့အား လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် ဆန္ဒမရှိဘဲ ဂျူးဘာသာရေးနှင့် သမိုင်းအပေါ် ကတိကဝတ်ပြုမှုသဘောကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ လူများသည် တစ်ချိန်က ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားတစ်ခု၏ အခြားရွေးချယ်စရာများကို ရှာဖွေနေကြပြီး ၎င်းတို့သည် အထောက်အထားနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များ ပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက် ဂျူးလူမျိုးများ ခံစားနိုင်စေရန် ရှာဖွေနေကြသည်။ ဤအဆုံးသတ်အတွက်၊ မေးခွန်းအသစ်များနှင့် အယူအဆအသစ်များကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို ပုံဖော်ခြင်းတွင် ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် အချည်းနှီးသော အားထုတ်မှုတို့ကို ထည့်သွင်းထားသည်။
ကျွန်တော့်အမြင်အရ၊ ဂျူးလူမျိုးအကြောင်း ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုအား ဆွေးနွေးရန် နည်းလမ်းမရှိတော့ဘဲ၊ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရန်မှာ သေချာပေါက် အရေးမကြီးလှပေ။ ကွန်ဗင်းရှင်းတစ်ခုဆိုရင် သဘောတူညီချက်တွေဘာကြောင့် ငြင်းခုံနေရတာလဲ။ ပေါ်လာသော သဘောတူညီချက်များကို အသီးသီး လက်မှတ်ရေးထိုးကြမည်ဖြစ်သည်။ လောကုတ္တရာပညာဆိုရင် ငြင်းခုံငြင်းခုံဖို့ ဘယ်လိုလက်လှမ်းမီရမလဲဆိုတာ မမြင်ပါဘူး။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျူးလူမျိုးတစ်ဦး (ဟာလာခရစ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်) ဂျူးအထောက်အထားတစ်ခု၏ ခိုင်မာသော သန္ဓေတည်ခြင်းကို လက်ခံလျှင်ပင်၊ ၎င်းသည် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်၊ ငြင်းခုံရန်ဖြစ်ပြီး သဘောတူဆုံးဖြတ်ရန် သေချာပေါက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယင်းတို့သည် အခြေအမြစ်မရှိသော အတွေးခေါ်အဆိုပြုချက်များဖြစ်ပြီး အခြားအရာများသည် လုံးဝအချည်းနှီးဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိခြင်း၏ စမ်းသပ်မှုကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေကြသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်ထောက်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤအရာအားလုံးသည် လက်တွေ့ကျသော အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ ဒါတွေက လူတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုန်းကန်မှုတွေ၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘာမှ မဆိုင်တော့ဘူး။
မလိုအပ်ဘဲ အရေးမကြီးတဲ့ အငြင်းအခုံကို အခု ပြိုင်ဘက်ကို ပုတ်ခတ်ဖို့ အဓိက သုံးပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်အယူအဆကို မြှင့်တင်လိုသူတိုင်း - ဂျူးဘာသာသည် အမြဲဆိုရှယ်လစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုကဲ့သို့မဟုတ်သူ မည်သူမဆို ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအား ရှင်းပြသည်။ စစ်ဝါဒီဆန်သော အတွေးအခေါ်များကို စိတ်ဝင်စားသော အခြားသူများကလည်း ဂျူးအယူဝါဒနှင့် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာကို ချီးမွမ်းကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ အရင်းရှင်စနစ်၊ လွတ်လပ်မှု၊ ပွင့်လင်းမှု၊ အကျပ်ကိုင်မှု၊ ပရဟိတနှင့် ကြင်နာမှု၊ လူမှုရေးတရားမျှတမှုနှင့် အခြားသော မြင့်မြတ်သောတန်ဖိုးများအားလုံးတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ဂျူးဘာသာသည် တစ်ပါးအမျိုးသားများအတွက် အလင်းရောင်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ထိုအလင်း၏သဘောသဘာဝသည် အခြေခံအားဖြင့် ငြင်းခုံ၍မရ၊ အဆုံးအဖြတ်မရှိပေ။ အခြားအငြင်းပွားမှုများနှင့် မတူဘဲ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြနိုင်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် တန်ဖိုးအချို့ရှိနိုင်သည်၊ ဂျူးလူမျိုးအထောက်အထားနှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုသည် မူအားဖြင့်ဖြေရှင်း၍မရဘဲ မည်သည့်သဘောဖြင့်မျှ အရေးမကြီးပါ။
ယုတ္တိနည်းကျကျ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသောအရာတစ်ခုမှာ ဤတန်ဖိုးများ (ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၊ စစ်ဘက်ဝါဒ၊ လူမှုရေးတရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ လွတ်လပ်မှုစသည်) သို့မဟုတ် အခြားတန်ဖိုးတစ်ခု၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သို့မဟုတ် လုံလောက်သောဒြပ်စင်တစ်ခုမျှ မပါဝင်နိုင်ပါ။ ဂျူးအထောက်အထား။ အဆိုပါတန်ဖိုးများကိုယုံကြည်သူမည်သူမဆိုသို့မဟုတ်သူတို့၏ပေါင်းစပ်မှုတွင်မဆိုစိတ်ကူးယဉ်လူမျိုးခြားဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအားလုံးအမြင်များ။ ဆိုရှယ်လစ်လူမျိုးခြားဖြစ်ခြင်း၊ တန်းတူညီမျှမှု သို့မဟုတ် လွတ်လပ်မှုကို ထောက်ခံအားပေးခြင်း၊ စစ်ဝါဒီဖြစ်ခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအရာအားလုံးသည် ဂျူးလူမျိုးလက္ခဏာအတွက် စံနှုန်းများမဟုတ်ပေ၊ မယုံနိုင်စရာများ (မဖြစ်မည်ကို မကြောက်ပါနှင့်) နှင့် တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် အရင်းအမြစ်များမှ ယင်းတို့အနက်မှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း အမှန်ပင် သက်သေပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီအထောက်အထားအစီအစဉ်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းခုံခြင်းသည် အချည်းနှီးဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးမရှိဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားနဲ့လည်း အလားတူပါပဲ။ ဂျူးမိခင်မှမွေးဖွားလာသူ သို့မဟုတ် ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကူးပြောင်းသူ မည်သူမဆို Torah ၏ပညတ်တော်များနှင့် ပညာရှိများ၏စကားများကို လိုက်နာပြီး လွန်ကျူးခြင်းမကျူးလွန်ဘဲနေရမည်။ ဒါပဲ။ လူ၊ သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ကိစ္စဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လောကုတ္တရာ၊ သမားရိုးကျ သို့မဟုတ် အမနွင်း (သတ်မှတ်၍မရနိုင်သော) မရှိမဖြစ်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံး မှန်ကန်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဆွေးနွေးရာတွင်လည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။
ထိုသို့သော ဆွေးနွေးမှု၏ အကျိုးဆက်က အဘယ်အရာ ဖြစ်နိုင်သည်ကို သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။ သူသည် ဂျူးကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်ကို တစ်စုံတစ်ဦးမှ ကျေနပ်မှုခံစားရမည်လား။ စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ ခံစားချက်က ကောင်းပါတယ်။ တန်ဖိုးသဘောအရ ဝိသေသလက္ခဏာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များသည် မြုံပြီး အချည်းနှီးသော သဘောတရားများဖြစ်သောကြောင့် မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသည့်အတွက် တိကျသေချာသော အဓိပ္ပာယ်ကို ပေးဆောင်ပါက ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို ဆွေးနွေးရန် ဖြစ်နိုင်ချေ (ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်)။ သို့သော် ယေဘူယျဆွေးနွေးမှုဖြစ်သရွေ့ လူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ ဂျူးဘာသာကို မိမိတို့ဆန္ဒအတိုင်း သတ်မှတ်ကြမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုက မှန်သလို နောက်တစ်ခုက မှားတယ်ဆိုရင်တောင် ဒီမေးခွန်းဟာ အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကနေ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသီအနည်းငယ်ကလွဲရင် ဒီမေးခွန်းက ဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်မဝင်စားသင့်ပါဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဤသူရဲကောင်းဆန်ပြီး အချည်းနှီးသောအားထုတ်မှုကို ကျွန်ုပ်မည်သူနည်း။ Sisyphus သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှု အမှတ်သညာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်...
 ဂျာမနီမှ Eldad Beck၊ YNET၊ 1.2.2014။
 လောကအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပညာရှင်ဘာသာရေးလက္ခဏာဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ပေါ်ပေါက်စေသည် (၎င်းမှာ ပရိုတက်စတင့်၊ မွတ်စ်လင်မ် သို့မဟုတ် ကက်သလစ်၊ လောကီပညာကို ဆိုလိုပါသလား။)
 ကျွန်ုပ်တို့သည် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါက၊ မေးခွန်းထုတ်နေသည့် mitzvos ၏ သဘောသဘာဝနှင့် ၎င်းတို့၏ လိုက်နာစောင့်ထိန်းမှုအတွက် လှုံ့ဆော်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပညတ်တရားသည် ကိုယ်ကျင့်တရားလိုအပ်သော်လည်း၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းအတွက် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်သောကြောင့် ဤအခြေခံဖြင့် ဂျူးဘာသာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ စာရိတ္တသဘောသဘာဝမရှိသော Eretz Yisrael ၏ဖြေရှင်းမှုကဲ့သို့သော mitzvot သည်ပင်လျှင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဂျူးလူမျိုးလက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ် မသတ်မှတ်နိုင်ပေ။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့၏ တည်ရှိမှုသည် တစ်နေရာတည်းမှ ဆင်းသက်လာသည်။
 ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းသည် အခြားသော halakhic ပြဿနာများကဲ့သို့ပင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက် လုံလောက်ပါသည်။
 ယင်းက စာအုပ်ကို ဘာသာစကား နှစ်ဆယ်ဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဆုများရရှိခြင်းကို မရပ်တန့်စေခဲ့ပေ။
 အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Eldad Beck ၏စာကိုကိုးကားကြည့်ပါ။
 ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်ရစရာ အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်၊ ထိုအချိန်က သမ္မတ Haim Herzog က ယုန်မိန့်ခွန်းကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ယနေ့အထိ အခြားသူများစွာက ဤ "စံသတ်မှတ်ချက်" ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု အနည်းငယ်ရှိသော မည်သူမဆို ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ဖြစ်စဉ်ကို အံ့သြကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျူးအယူအဆကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလိုပြီး အောက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်လိုသည်- အောက်ပါပုံစံဖြင့် X ၏နေရာတွင် ထားရှိနိုင်သည့်အရာအားလုံး- "X ခံစားခဲ့ရသော X" နှင့် ဖော်ပြချက်သည် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်သည်။ ဤအဓိပ္ပါယ်အရ၊ မိမိကိုယ်မိမိ လိမ်ညာခြင်းမရှိသော မည်သည့်သတ္တဝါသည် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်သည် (နေရာချထားရေးအဖွဲ့ကို စစ်ဆေးပါ)။
 Gideon Ofrat ၏ အထက်ဖော်ပြပါ နိဂုံးချုပ်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ရပေမည်။ အနုပညာဆိုတာ မရှိဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဆွေးနွေးတာက မလိုအပ်ဘဲနဲ့ အကျိုးမရှိဘူးလို့ပဲ ကောက်ချက်ချတယ်။
"ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်နှင့် ယေဘူယျအားဖြင့် ဂျူးလူမျိုးများ၏လက္ခဏာ" ဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်3ခု
H. Bayer 22 - 04/2018/21 နာရီ 59:XNUMX
ရဗ္ဗိက မှတ်စု7ကို ထပ်ရှင်းပြနိုင်မလား။
H. Bayer 23 - 04/2018/07 နာရီ 06:XNUMX
ယုဒလူကို မိမိကိုယ်မိမိ ယုဒလူဟု ထင်သောသူဟု သင်သတ်မှတ်သောအခါ၊ သင်သည် ဘာမှ မပြောပါ။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် သုံးသော အသုံးအနှုန်းများသည် ၎င်းမတိုင်မီနှင့် မပါဘဲ ရင်းနှီးနေသင့်သည်။ ဒါကြောင့် ဂျူးဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်က X လို့ယူဆရင် အဓိပ္ပါယ်က ရှင်းဖို့လိုတယ်ဆိုရင် အခြေခံအားဖြင့်တော့ ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာမှာ ဂျူးလူမျိုးဟာ X လို့ယူဆတဲ့ X လို့ယူဆထားကြပါတယ်။
19 Tammuz 07 - 2019 အချိန် 10:26 နာရီ
ငါသဘောမတူဘူး။ လုံးဝ မသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ဖို့။ Kabbalah တွင် မြင့်မြတ်သော နှင့် တောက်ပမှု စသည်တို့ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ မရေရာသော Torah ဖြင့် ပြောဆိုနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ၎င်းသည် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်။ သေချာပေါက် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ သူ့ကို အခု မခေါ်ဘူး။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကင်းမဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာ လူတိုင်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် စည်းလုံးညီညွတ်စေသော နိယာမမရှိဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် လူတိုင်းအတွက် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ အထောက်အထားမရှိပါ။ ဂျူးအထောက်အထားအတွက် နဖ်ကာမီနာတစ်ခုရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်သည် မိမိကိုယ်ကို ဂျူးလူမျိုးတစ်ဦးအဖြစ် မြင်ပြီး အခြားသော ဂျူးတစ်ဦး၏ ဝိသေသလက္ခဏာကို သံသယမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် သူနှင့် ဆက်စပ်၍ တစ်စုံတစ်ရာသော လုပ်ရပ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်သောအခါ၊ ၎င်းကို ဂျူးအမူအရာအဖြစ် သတ်မှတ်သောအခါ၊ ယုဒလူတစ်ဦးဟု ဆိုရမည်၊ သူ၏ ဂျူးတန်ဖိုးများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ ဤလုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ကြောင်တစ်ကောင်သည် ကျိုးနွံသောဘာသာတရားနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ကျိုးနွံစွာ ပြုမူနေသော်လည်း လူသည် ခွေးကဲ့သို့ ပြုမူကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် စားသောက်နိုင်သော အရည်အချင်းရှိသောကြောင့်၊ သူရွေးတဲ့လမ်းက သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။
အကယ်၍ ဂျူးလူမျိုးသည် မိမိကိုယ်မိမိ ဂျူးလူသစ်တစ်ဦးအဖြစ် အမှန်တကယ်မြင်ပြီး ဂျူးလူမျိုးအဖြစ်မှ မိမိကိုယ်ကို ခွဲထုတ်ပါက၊ အခြားသော ဥပမာအားဖြင့်၊ အထူးသဖြင့် ဂျူးနိုင်ငံအဖြစ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကနေ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါ လိင်မှုလို့ခေါ်ပြီး ဂျူးဥပဒေအရ သွယ်ဝိုက်သေစေသင့်တယ်။
ဒါ​ကြောင့် ကျွန်​တော်​တို့​အားလုံး ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ဂျူး​တွေ​လို့ မြင်​ရင်၊ ကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် တူညီသောအရာတစ်ခုရှိသည်၊ ယင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျူးလူမျိုး၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား အရှုံးမပေးစေရန်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ပေါင်းသင်းရန်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဂျူးများအားလုံးနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ ပညတ်တရားကို အသိအမှတ်မပြုသော ဂျူးများပင် ဝန်ခံသောကြောင့် ဤသည်မှာ တရားဥပဒေ၏ အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ပေ။ ဤသည်မှာ ဂျူးများအားလုံး လိုချင်သော ဘဝလမ်း၏ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သည်။ ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ယုဒလူတစ်ဦးအဖြစ် သူ၏ဘ၀တွင် ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို သိရှိရန်ရှာဖွေနေချိန်၌ပင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ၎င်းသည် တန်ဖိုး၏ဗဟိုဖြစ်သည်။ အဲဒါကို သဘောပေါက်ဖို့ ကြိုးပမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အင်အားသုံးပြီး လျစ်လျူရှုဖို့ ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါလည်း သဘောထားတစ်ခုပါပဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သူနှင့်ဆက်ဆံရေးမရှိသောတန်ဖိုးသည် သူမစဉ်းစားသောအရာကို လုံးဝမငြင်းဘဲနှင့် ပဋိပက္ခများကို မစီမံတတ်ပေ။
ပရိသတ် ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)
ငိုကြွေးသောချိုင့်၌ ဂရန် Bennett ၏ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များ (ကော်လံ ၄၈၆)